Fanaraha-maso ara-tsosialy sy ara-toekarena | Fiaretana haran-dranomasina
Fanaraha-maso sosialy sy toekarena
Ny olona sy ny tontolo iainana haran-dranomasina dia mifamatotra tsy misy ifandraisany: ny tontolo iainana dia manome serivisy lehibe ho an'ny vondrom-piarahamonina sy ny indostria eo an-toerana, ary ny fahasalaman'ny tontolo iainana dia mitaona mafy ny asan'ny olombelona. Ny fahazoana ireo fifandraisana ireo dia zava-dehibe amin'ny fitantanana mahomby ny haran-dranomasina. Ny fanombanana sy fanaraha-maso ny sosialy-toekarena dia manome ny fahalalana izay miteraka fanapahan-kevitra tsara momba ny fitantanana miaraka amin'ny fampahalalana momba ny toe-piainana ara-tsosialy, ara-kolotsaina, ara-toekarena ary ara-politika an'ny olona tsirairay, tokantrano, vondrona, vondrom-piarahamonina ary fikambanana. Amin'ny tontolon'ny tontolo iainana haran-dranomasina, ny fanombanana sosialy-toekarena sy ny fanaraha-maso dia azo ampiasaina hamaritana ny lamina fampiasana sy soatoavina, fiankinan-doha ary loharanom-pahalalana momba ny fitantanana haran-dranomasina.
Fomba isan-karazany azo ampiasaina hanangonana tahirin-kevitra ara-tsosialy sy ara-toekarena hampiasain'ny mpitantana haran-dranomasina, toy ny dinidinika ifantohan'ny vondrona, ny fanadihadiana an-trano, ny tafa sy dinika momba ny loharanom-baovao marobe. Ny teknika ampiasaina dia hiankina amin'ny tanjon'ny tombana, ny tontolon'ny fiaraha-monina ary ny loharano azo alaina.
Ireo mpanjono eo an-toerana izay nitafatafa tany Papua New Guinea. Sary © Tessa Hempson
Ny protokolom-panaraha-maso sosialy-toekarena be mpampiasa indrindra dia ny Socioeconomic Monitoring Initiative for Coastal Management ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSocMon). Ny SocMon dia miasa amin'ny alàlan'ny mpiara-miombon'antoka isam-paritra sy eo an-toerana hanamorana ny fanaraha-maso ny fiaraha-monina sy ny toekarena.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAddendum amin'ny SocMon momba ireo tondro hanondroana ny fahalemena eo amin'ny fiaraha-monina
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoRafitra IUCN ho fampifanarahana ara-tsosialy amin'ny fiovan'ny toetrandro manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoIreo mari-pamantarana handraisana ny fahamendrehana ara-tsosialy eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fiovan'ny toetrandromanokatra fisie PDF